भगवान बुद्धले सिकेका ६४ ओटा लिपिहरु मध्ये ‘ब्राह्मी लिपि’ प्राचिन हो « Pana Khabar
ब्राह्मी लिपि प्राचीन लिपि हो । यसबाट एशियामा वोलिने थुप्रै लिपिहरुको विकास भएको मानिन्छ । खाश रुपमा भन्दा हाम्रो देवनागरी सहित अन्य दक्षिण एशियाई मुलुकहरु , दक्षिण पूर्वी एशियाई मुलुकहरु , तिब्बती तथा केहीको मतमा कोरियाई लिपिको विकासपनि यसैबाट भएको हो भन्ने गरेको भेटिन्छ ।
इथियोपियाई लिपिमा पनि ब्राह्मी लिपिकै प्रभाव रहेको मान्ने थुप्रै छन् । यो लिपिको प्राचिनता खोज्दा ” ललितविस्तर ” भन्ने बौद्ध ग्रन्थ भेटिन्छ जसमा ६४ लिपिहरुको कुरो गरिएको छ । त्यस ग्रन्थमा ‘ब्रह्मलिपि’ को नाम अंकित गरिएको छ । यस बाहेक यस लिपिको पुरानो स्वरुप अशोकको शिलालेखहरुमा सुरक्षित देखिन्छ ।
भगवान बुद्धले ६४ ओटा लिपिहरु सिकेका थिए रे त्यसमध्ये एउटा व्राह्मी लिपि पनि हो भन्नेकुरा त्यै ‘ललितविस्तर’ भन्ने ग्रन्थले बताउँदछ । त्यो ललितविस्तर ग्रन्थको चीनीयाँ भाषामा अनुवाद ई० स० ३०८ मा गरिएको थियो । त्यस्तै जैनहरुको ‘पन्नवणा सूत्र’ र ‘समवायांग सूत्र’ मा १८ बटा लिपिहरुको नाम उल्लेख गरिएको छ जसको पहिलो शंख्या क्रममा बंभी (ब्राह्मी) को नाउँ उल्लेख छ ।
त्यसै ग्रन्थको भगवतीसूत्रको शुरुमा ‘नमो बंभीए लिबिए’ (ब्राह्मी लिपिलाई नमस्कार) भनेर भनिएको देखिन्छ ।
यस क्षेत्रको लिपिको इतिहाँस खोज्दा सबैभन्दा प्राचीन लिपिको रुपमा शम्राट अशोकले प्रयोग गरेको ” ब्राह्मी लिपि” नै भेटिएको छ जो सर्वत्र एकै रुपको छ । त्यो प्राचीन आर्य या ब्राह्मणहरुले विकशित गरेका लिपि हो जसलाई ब्राह्मी लिपि भनेर चिन्हियो ।
जैनहरुको ‘प्रज्ञापनासूत्र’ मा लेखिए अनुसार ‘अर्धमगधी’ भाषा जुन लिपिमा प्रकाशित भयो त्यो ब्राह्मी लिपि थियो । त्यो अर्धमगधी भाषा मथुरा र पाटलिपुत्र बीच रहेको प्रदेशको भाषा मानिन्छ । यसैबाट नेपाली भाषा निस्किन पुगेको हो । यसरी हेर्दा ब्राह्मी लिपि यस आर्यावर्तको मौलिक लिपि मानिन पुग्छ जसबाट “देव नागरी ” लिपिको समेत विकास भयो । मगध राज्यको तत्कालिन राजा आदित्यसेनको समय (ईशाको सातौँ शताब्दी) तिरको मगधी अक्षरहरुमा देव नागरी भाषाको वर्तमान रूप देख्न सकिन्छ ।
ईशाको नवौं र १०औं शताब्दीदेखि देवनागरी लिपि आजको आफ्नो स्वरुपमा आएको देखिन्छ । भगवान बुद्ध आफ्नो उपदेश मगधी प्राकृत मानै दिन्थे । यसको सम्वन्ध मैथिली ,भोजपुरी , नेपाली भाषाहरु संग गाँसिन्छ , जो भारोपेली परिवारको भाषाहरु हो । मैथिलीको पारंपरिक लिपि “कैथी” भनिएतापनि अहिले देवनागरी लिपि मै सवैले लेखेको देखिन्छ ।
त्यसैले मगधी भाषालाई यस क्षेत्रका भाषाविदहरुले ” सा मगधी मूलभाषा ” भनेर वर्णन गरेको भेटिन्छ । भगवान गौतम बुद्धको समयमा मागधी नै मूल भाषाको रुपमा जन मानसमा बोल्ने गरिन्थ्यो | पालि भाषालाई पछि मगधी भनिएको हो भन्नेपनि थुप्रै भाषाविद देखिन्छन ।
ब्राह्मी लिपि ?
वेदव्यासलाई महाभारत ग्रन्थ पुरागर्न लगभग ३ वर्ष लागेको थियो रे । त्यतिखेर तत्कालिन साहित्य लेख्न लिपि कलाको विकास भै सकेको थिएन । त्यसै कारणले होला ऋषि मुनिहरुले वैदिक ग्रन्थहरु पुस्तौं पुस्तासम्म परम्परागत वैखरी वृत्ति र मौखिक रुपबाट कण्ठस्तगरि हजारौं बर्ष सम्म सुरक्षित राख्न सफल भएका थिए । त्यतिखेर संस्कृतनै ऋषिमुनिहरुको एकमात्र भाषा थियो र ब्राह्मी आम बोलचालको भाषा हुने गरेको थियो भन्नेकुरा महाभारत ग्रन्थको तलको श्लोकले पुष्टी गर्दछ ।
राजवद् रुप्वेषौ ते ब्राह्मी वाचं विभर्षि च ।
को नाम त्वं कुत च असि कस्य पुत्र च शंस मे॥(महाभारत आदिपर्व ८१/१३)
अर्थात तपाइंको रुप र भेष राजा तुल्य छ र ब्राह्मी वाणी बोलीरहनु (वाचं) भएको छ । मलाई बताउनोस तपाईं को हो ? , कहाँ बाट आउनु भएको हो र कसको छोरो हो ?
यो कुराकानी देवयानी र राजा ययाति बीच को हो । अब हाम्रो शंका हटेको हुनु पर्छ किनभने माथि सफा शब्दमा लेखिएको छ – ब्राह्मी वाचं अर्थात ब्राह्मी वाणी या भाषा ।
पछि विस्तारै वैदिक युगको विशेषता ह्रास हुँदै गएपछि ऋषिहरु संग सुरक्षित रहेको वैदिक साहित्य कण्ठ गरेर जोगाउने शैलीमा ह्रास आउंदै गयो र वैदिक साहित्यलाई पाण्डुलिपिहरुमा लेखेर सुरक्षित राख्ने वैज्ञानिक प्रचलन शुरु हुन पुग्यो | महाभारत ग्रन्थको आधुनिक स्वरुप धेरै अवस्था पारगरी आइपुगेको हो । विद्वानहरुले महाभारतको रचनाको चार प्रारम्भिक अवस्था उल्लेख गरेका छन् । यो अवस्था निम्नानुसार वर्णित छ ।
शुरुमा यो ग्रन्थ आठ हजार आठ सय श्लोकको थियो , त्यतिखेर यसलाई ” जय ग्रन्थ ” भनिन्थ्यो ।जुन ग्रन्थ व्यासले आफ्नो छोरा सुकदेवलाई सुनाएका थिए । त्यसपछि उनको त्यो ग्रन्थको कथा शिष्य वैशम्पायनले जनमेजयलाई सुनाए अनि त्यो ग्रन्थको श्लोक शंख्या चौबीस हजार हुन् पुग्यो त्यतिखेर यस ग्रन्थ लाई ” भारत ” भनियो र नैमिषारण्यमा अठासी हजार ऋषिहरुलाई सुनाउँदा आख्यान र उपाख्यान थपिनपुगि एक लाख श्लोक शंख्याको हुन पुग्यो र यसलाई ” महाभारत ” भन्नेकुरा लिखित रुपमा व्यक्त गरेको भेटिन्छ ।
पुरानो भनिएको श्लोक आठ हजार आठ सयको अर्थ गहन छ र स्वयं वेदव्यासकै शब्दमा ” ती श्लोकको अर्थ म जान्दछु , शुक जान्दछ र शायद संजयले जान्दो होला ” भन्ने उल्लेख गरिएको छ । यस ग्रंथमा चंद्रवंश को वर्णन छ | यस बाहेक न्याय, शिक्षा, चिकित्सा, ज्योतिष, युद्धनीति, योगशास्त्र, अर्थशास्त्र, वास्तुशास्त्र, शिल्पशास्त्र, कामशास्त्र, खगोलविद्या तथा धर्मशास्त्रको पनि विस्तार पूर्वक वर्णन गरिएको छ । त्यसैले महाभारत महाकाव्य ‘जय’, ‘भारत’ र ‘महाभारत’ यी तीनै नाउँले प्रसिद्ध हुन् पुग्यो ।
महाभारत ३१५० ईशा पूर्व लेखिएको प्रमाणित भएको छ त्यस ग्रन्थमै वर्णित ज्योतिषीय तिथिहरु , भाषागत विश्लेषण, विदेशी सूत्र एवं पुरातत्व प्रमाण संग मेल खाएको भेटिन्छ । तर आधुनिक संस्करणको रचना चाहीं ६००-२०० ईशा पूर्व तिर भएको हुन सक्छ किनभने अन्य वैदिक साहित्यहरु सरह यो महाकाव्य पनि पहिला वाचिक परंपरा बाटै पुस्तौं पुस्ता सम्म डोर्याएर ल्याइएको हो र पछि छपाई कला विकसित हुन्य पुगेपछि यसका भौगोलिक संस्करणहरु पनि छापिन पुगेका हुन् जसभित्र त्यस्ता धेरै घटनाहरु उल्लेखित गरिएका छन् जो मूल कथासंग मेल खाएको देखिन्नन् ।
महाभारत धार्मिक महाकाव्य पछि हुन पुगेको हो ,पहिला सवै वैदिक ग्रंथहरुमा दिएको संदर्भअनुसार एउटा इतिहास हो न कि पौराणिक कथा , यसलाई पछि धार्मिक महाकाव्य भनियो , तर यो ग्रंथ एक वैदिक इतिहास हो न कि धार्मिक महाकाव्य | आधुनिक इतिहास तथ्यमा आधारित हुन्छ । प्रमाणमा आधारित हुन्छ |
प्रमाण शोध गरिंदा परिणाम पाइन्छ तर महाभारतमा गरिएको वर्णनको शोध गरिएको छैन । पाश्चात्य जगतमा पनि इलियाड र ओडिसी इतिहासकै रुपमा लेखिएको थियो | पछि अनेकौं शोध पश्चात समकालीन आधुनिक इतिहासकारहरुले यसलाई ऐतिहासिक र इतिहास संग संबंधित ग्रन्थ को रुपमा ग्रहण गर्न थालेका हुन जो आज आएर धार्मिक ग्रन्थको रुपमा विख्यात हुन् पुगेको छ ।
नेपालमा हिंसाको याेजना बनाउने यूराेपीयन यूनियनहरुलाई देश निकाला गर, एनजिअाेहरू पनि खारेज गर
हाम्रो नेता खत्तम, हामी जनता झन् खत्तम!
अमेरिकाले मेरो देश बर्बाद पारिदियो
भष्मासुरलाई दिएको बरदानजस्तो नहोस्, कम्युनिस्ट गठबन्धनलाई नेपाली जनताले दिएको बहुमत